Uhlobo 'lungelo' kunye nesicwangciso sobuchule sokuthengisa ngentelekelelo: uMartin Vrijland
Iqela lemigulukudu eyingozi yezikrelemnqa ezibulala wonke umntu, iMocro Mafia, uhlaselo lweParool kunye neTelegraaf (ubuncinci koko kufuneka imifanekiso isenza ukuba sikholwe). 'Ukusuka kwi-EU kunye nokuchasana nokudityaniswa kwehlabathi' xa kuthelekiswa 'nerhasi epheleleyo ukuya kumbindi'. Abaphikisi bemozulu ngokuchaseneyo 'siya kungena kuyo ngaphakathi kweminyaka ye-12'. AmaNationalists ngokuchasene nobuSilamsi. Amakholwa eendaba xa kuthelekiswa nabamangaleli beendaba. Siyangqina kwi-polarization kunye nokudala i-brand yakhiwe kwintengiso enkulu. Iimpawu 'ezichanekileyo' zinxulunyaniswa nobuhlanga, i-anti-Islam, abafazi abangenabuhlobo, anti-GretaThumberg, anti-EU kunye nokukholelwa kwithiyori zethyibhuli nokunye. Lo ngumdlalo wehlabathi jikelele apho igama 'ekunene' lidityaniswa nguTrump, uBrexit Boris, uThierry Baudet, uMarine LePen, njalo njalo.
Ngokuyiguqula ibe yintsingiselo, amajelo eendaba ahlazisa wonke umntu ngamehlo agxekayo kwiindaba 'ezilungileyo'. "Ewe, 'ungumntu ongaqwalaseli imozulu" okanye "Ewe, ungumntu ongakholelwa kwisithethi sase911". Oku kubizwa ngokuba luphawu.
Amajelo osasazo ayitshise ngononophelo uphawu 'lungelo' ngokusebenzisa ii-pawns ezinje ngo-Thierry Baudet, Robert Jensen, George van Houts, njl.njl. Kudala ndixela kwangaphambili ukuba ixesha elide kwaye kungenxa yokuba ukugxeka kuluntu kufuneka kujike. Yiyo loo nto 'ilungelo' lavunyelwa ukuba libekho kwindawo yexeshana, kuba uphawu kwakufuneka luchazwe ngokucacileyo, ukuze xa uqoqosho luqhawuka, wonke umntu alithuke elo qela aze alichithe.
Bonke abo bantu baneempawu zophawu 'lwasekunene' (olwakhiwe ngamajelo osasazo kunye nabadlali abaphambili kwezopolitiko), banxibe 'inkwenkwezi yamaJuda' ebonakalayo ebonakalayo yophawu 'lwasekunene'. Olo hlobo luza kubhengezwa ngaphandle ukuba ukusilela kwayo yonke into kungabekwa kuloo nto. Nceda uqaphele: oko kusilela (oko kuqhawuka kwezoqoqosho) kucwangcisiwe kwaye kucwangciswe ngendlela ehambelanayo. Kungenxa yoko iTrump yokurhweba iimfazwe kwaye ke ngenxa yeengxoxo zeBrexit. Yinde icetywe kwangaphambili!
I-'lungelo 'lophawu lwenyani kwakufuneka lwakhiwe ngononophelo kwaye kamva lwandiswa, ukuze kwixa elizayo kungabikho mntu unokuphinda agxekwe ngomyalelo osele ukho kunye nomgaqo wendlela oya kuluntu jikelele. Elo qela ke limisiwe kwaye linetyala layo yonke into emiyo ukuba isilele. Sinikela ubungqina kwiphulo lokuthengisa elikhokelwe ngokufanelekileyo kwihlabathi liphela ukuze sijongane nokugxekwa kuluntu. Ukuba ugxekile, ulungile 'kwaye ungokeli qela. Hayi! Olohlobo lakhiwa ngamajelo osasazo nezopolitiko. Sukuthatha inxaxheba. Sukuwela iminatha yezokhuseleko yezopolitiko ezizama ukubeka kwakho uphawu. Sukuwela iipenns ezilawulwayo ezifana neBaudet kunye noRobert Jensen. Thatha umgama ukusuka uphawu 'lwasekunene' kunye polarization!
Ipolitiki kunye nemithombo yeendaba zidlala ebantwini. Azisekho iimpundu ngasemva. Kumnandi ukuva zonke iitrektara eThe Hague kule veki, kodwa zonke zilungelelaniswe kakuhle, zilawulwa kwaye zihanjiswa. Olona tshintsho lwenyani luvela ekubeni singasaniki mthethweni kwezopolitiko nakumajelo eendaba kwaye ungabaniki lizwi.
tags: olwaziyo, Brexit, iingcinga zobuqhetseba, eziziimbalasane, ihlabathi, urhwebo iimfazwe, uphawu, ubuzwe, kunene, ngobufazi
4 Oktobha 2019 kwi-16: 06
Ngasekhohlo kukho ubuFasi obuNtsha ..
5 Oktobha 2019 kwi-00: 22
Cinga ukuba kubhetele ukukholelwa ukuba ilizwe alikho mbi njengoko sixelelwe. U-Bangmakerij usibambe kwiindawo ezincinci.
Ndicinga ukuba abalimi babonisa uqhankqalazo mihla le ukuba ungabeka ilizwe lonke ngokulula. Ukuba uyeka ukuhlawula irhafu (ngerhafu) neqela elikhulu kakhulu, ke ngoko abanakwenza nto. Ngaba ucinga ukuba urhulumente wethu uza kuqhubeka esebenza engahlawulwanga e-The Hague? Ngaba ucinga ukuba uWim Lex uqhubeka nokusika iiribhoni ezingabhatalwanga? Andazi ngokuqinisekileyo, bakhona kuba sonke siyayifuna kwaye bayazi kakuhle kakhulu. I-bastards iyakhalaza imini yonke kodwa xa uMark okanye uWim Lex esiza kunye bame phambi kweflegi.
Nokuba sicinga ukuba siphaphile, kufuneka sizibuze yonke imihla ukuba ingaba iingcinga zethu aziphembeleleki ngaphandle.
Ndibona eli nqaku njengelichanekileyo, ngaphandle komabonwakude, iphephandaba, unomathotholo kunye ne-smartphone ilusuku oluhle kwihlabathi elihle 😎
7 Oktobha 2019 kwi-10: 43
Ngoku ukunxibelelanisa isihloko se-5G kwishishini 'lasekunene' (iphiko lasekunene) ngo-Boris Johnson kwaye ukugxekwa kungekudala kuya kutshitshiswa:
7 Oktobha 2019 kwi-20: 58
Ukuphela kwentetho yasimahla
Imithombo yeendaba ikuvumela ukuba uginye i-puspin's ukuba iyafuneka, ukusasazwa kwesininzi
Imithombo yeendaba ihlala ichanekile, ifana nqwa nomfundisi ecaweni, isoyikisa ngokwenyani, jonga imovie emfutshane phantsi, kulapho sikhona
« Ibala 'lokuchasana nemozulu' linxulunyaniswa nethiyori zenqanawa, ipolitiki yephiko lasekunene kunye neemvakalelo zesisu
Ukupheliswa Ukupheliswa liqela labaphembeleli abahlawulwayo »
Iindwendwe ezipheleleyo: 12.977.124
Ikhamera 2 op URuinerwold Drenthe kunye nosapho lwakhe, ukusebenza kwengqondo elandelayo (PsyOp) ukuya kwisimo samapolisa ngaphezulu
AllesGaatKapot op URuinerwold Drenthe kunye nosapho lwakhe, ukusebenza kwengqondo elandelayo (PsyOp) ukuya kwisimo samapolisa ngaphezulu